ICG အဖွဲ့က သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကို ငြိမ်းချမ်းရေးဆု ချီးမြှင့်
International Crisis Group (ICG) ခေါ် နိုင်ငံတ ကာ ပဋိပက္ခလေ့လာရေးအဖွဲ့က သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးဆု ချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်က ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဆီယမ်ရိ(ပ်)တွင်ကျင်းပသည့် အမေရိကန်-အာဆီယံ စီးပွားရေး ဖိုရမ်တွင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် မိန့်ခွန်း ပြောကြားနေစဉ်။
ICG ရဲ့ In Pursuit of Peace award dinner ခေါ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆု ချီးမြှင့်ပွဲ နဲ့ ညစာစားပွဲဟာ လူသိန်းပေါင်း များစွာရဲ့ဘဝတွေကို အသွင်ပြောင်းစေတဲ့ အမြင်ကျယ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မှု နဲ့ ပဋ္ဋိပက္ခတွေ ပြီးဆုံးရေး ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ အစိုးရ၊ သံရေးတမန်ရေး နဲ့ ပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒ ဆိုင်ရာ အဓိက ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ ဆုဖြစ်ကြောင်း ICG ရဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ဒီဆု ကို မြန်မာနိုင်ငံက ဦးသိန်းစိန် နဲ့ ဘရာဇီးနိုင်ငံက သမ္မတဟောင်း မစ္စတာ Lula Silva တို့ကို ပူးတွဲချီးမြှင့်ခဲ့ တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ICG အဖွဲ့ နာယက Thomas R. Pickering က -
“အခုလို ကမ္ဘာကြီးရဲ့ နေရာအတော်များများ မှားယွင်းတဲ့ လမ်းကြောင်းကို ဦးတည်နေပုံရတဲ့ အချိန်မျိုး မှာ မြန်မာနိုင်ငံ နဲ့ ဘရာဇီးနိုင်ငံ သမ္မတတွေဟာ သူတို့ ပြည်သူ တွေ ပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ရှိဖို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်၊ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရော သမ္မတ Lula ရော ဒီဆုနဲ့ ထိုက်တန်ပါတယ်။ ဒီလို ဂုဏ်ပြုရတဲ့အတွက် မြန်မာနဲ့ ဘရာဇီးတို့အတွက် ရှေ့ဆက်မယ့် အရေးကြီးတဲ့ ခြေလှမ်းတွေ ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းဖို့ အထောက်အကူ ဖြစ်ပါမယ်။ အပယ်ခံနှစ်ကာလ တွေ ကနေ ဒေသတွင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး မြှင့်တင်ရာမှာ အားပေးသလို ဖြစ်ပါတယ်” လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရသစ်ဟာ ဒီနေ့အထိ ဆောင်ရွက်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးဖြေလျှော့မှုတွေအပြင် လတ်တလော ရခိုင်ပြည်နယ်ပြဿနာ၊ ကချင်ပြည်နယ် ကိစ္စ စတဲ့ ဆက်လက်ဖြေရှင်းစရာတွေရှိေျနသေးတယ်လို့ ICG ကြေညာချက်မှာဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ဆုချီးမြှင့်ပွဲကို ၂၀၁၃ခုနှစ် ဧပြီလ (၁၁)ရက်နေ့ အမေရကိန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့မှာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၈) နှစ် ကြာလာခဲ့ပြီ ဖြစ်တဲ့ ICG ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆု ချီးမြှင့် ခံခဲ့ရသူတွေထဲမှာ အမေရိကန် သမ္မတတွေ
ဖြစ်ကြတဲ့ Cliton နှင့် George W. Bush ၊ နိုဘယ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် Martti Ahtisaari ၊ Ellen Johnson Sirleaf နဲ့ အလှူရှင် သူဌေးကြီး George Soros တို့ ပါဝင်ကြပါတယ်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဟားခါးမြို့က ချင်းအမျိုးသားနေ့ တက်ရောက်
၂ဝ၁၅ ခုနှစ် စိန်ခေါ်မှုတွေ အကြောင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ပြောကြား
မြန်မာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ပြင်သစ်ကို ရောက်ရှိ
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဒုတိယ ဥရောပခရီးစဉ် စတင်
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ခရီးစဉ်အတွင်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ တားဆီးပေးဖို့ ဗြိတိန်ပါလီမန် အမတ်များ တောင်းဆို
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရမည့် ကဏ္ဍများစွာ ကျန်ရှိနေသေး
ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကို အစဉ်လေးစားကူညီမယ်လို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ပြော
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၈ ပါတီ တွေ့ဆုံ
နေရပ်- San Francisco
ICG is turning blind eyes to what is really happening in Burma today.
80% of burma economy are still under the control of The Union of Myanmar Economic Holdings Limited and their cronies.
Thein Sein’s gov are not doing what they are promised .
Apr 24, 2013 08:05 PM
နေရပ်- Rangoon, Burma
ှုICG ကိုတော့ တော်တော် ရွံသွားပြီ ။ Brazil - Former President Lula Silva လို အင်မတန် တိုင်းပြည်ပေါ် စေတနာ မေတ္တာထားတဲ့ ပဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့တောင် တွဲပြးီ ဆုးပေး လိုက်ရတယ်လို့ ။
Nov 28, 2012 11:44 PM
Nov 28, 2012 08:32 AM
နေရပ်- Portland USA
You must deliver your promises sincerely to the people of Burma. You must use your authority of good office to stop inciting hatred, violence. Please do not hesitate or afraid to prosecute criminal who mastermind ethnic cleaning in Arakan. You must be brave enough to acknowledge denial of fundamental right of Rohingya by your government and restore that right. You must have wisdom to educate the people of Burma about human right which include the right Rohingya.
Nov 27, 2012 02:11 PM
Congratulations, U Thein Sein. You are good president of union of Burma. Please amend some unjustice paragraphs at Burmese constitutation law 2008. Thank you.
Nov 27, 2012 06:52 AM